Tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu go'aaminayo nooca kombiyuutarka ee la iibsado
Go'aaminta laptop-yada si aad u iibsato waxay noqon kartaa mid adag, iyada oo boqolaal ka mid ah moodooyinka laptop-ka ay kala dooranayaan iyo qiimaha kala duwan ee ka hooseeya $ 200 ee Chromebooks ilaa $ 2,000 laptops dhamaadka. Marka lagu daro miisaaniyaddaada, nooca shaqada iyo ciyaarta aad qorsheyneyso inaad ku sameyso laptop-kaaga waa inuu kaa caawiyaa inaad xoojiso xulashooyinkaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan iibinta laptop iibsashada caqliga leh.
1. Tixgeli nidaamka hawlgalkaaga. Waxaad haysataa doorashooyin badan oo leh laptops Windows, laakiin Apple's MacBook Pro iyo Macintaanka MacBook Air ayaa sidoo kale ka shaqeyn kara Windows, taas oo ka dhigaysa buugyadahaan soo jiidashada ay u kala duwan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, laptops'ka Apple waa mid aad u qiimo badan. Haddii aad ka fekereyso dooddan da'da ah ee u dhaxaysa Mac ama PC kombiyuutarka, ka feker inta aad runtii rabtid inaad qarash gareeysid (fiiri hoos) iyo haddii aad u baahan tahay kombuyuutar ku shaqeynaya (Blu-ray, kumbiyuutarrada taabashada, tunciyeyaasha tv-ga, iwm) ma heli karo on a noocyo kala duwan Apple bixiyaan.
2. Ka bilow miisaaniyaddaada.
Netbooks waa nooca ugu jaban uguna yar ee laptop-ka, waxaadna u adeegsan kartaa ganacsiga , laakiin aad bay u yaryihiin oo xaddidan yihiin. Waxaa sidoo kale lagu beddelay kiniin iyo laptops awood leh oo yareynaya cabbirka iyo miisaanka.
Waxaad ka iibsan kartaa laptop miisaaniyad , oo u fiican hawlaha asaasiga ah sida booqashada webka iyo farsamaynta erayada, illaa $ 500 (xittaa waxoogaa yar inta lagu jiro maalmaha fasaxyada sida Black Friday iyo Cyber ​​Monday); laptops-ka mararka qaarkood waxay isticmaalaan kambuyuutarro waaweyn oo badanaa waxay ku yimaadaan 15.6 "cabbirka bandhigga. Guud ahaan, kuwa yar yar iyo kuwa khafiifiya ee aad rabto in aad kombuyuutarkaadu noqdaan, inta badan waa inaad bixiso.
Haddii aad haysato laba boqol oo dheeraad ah oo aad ku qaadato (inta udhaxeysa $ 600 ilaa $ 1000), waxaad ka iibsan kartaa kombiyuutarka khafiifka ah ee khafiif ah (4 illaa 6 rodol iyo 14-inch ilaa 16-inch), oo leh qaab ciyaareed wanaagsan: jiilka cusub xawaaraha, 500 gb ah ama wax ka badan, iyo xasuus badan. Nalalka iyo laydhka ayaa ah kuwa ugu badan ee laptops lagu iibiyo (oo loo iibsaday) maanta.
$ 1,000 ama wax ka badan, waxaad dooran kartaa labada lapto fareeb leh - miisaan culus, iyo dhuuban, oo dhererka shaashadda 13 inji ama ka yar - ama tago habka kale, iyo iibso laptop gaming ama laptop-ka bedelka laptop- -shiiro miisaan leh iyo shaashado 17-inch weyn oo weyn.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada kombiyuutarka .
3. Samee liis hubineed oo muhiim u ah laptop aad ku xiga. Ka feker sida aad rabto inaad u isticmaasho kombiyuutarkaada si aad ugu qaddariso sifooyinka aad u baahan tahay in aad ka eegto laptop-kaaga soo socda :
Madadaalada, sida muusikada iyo filimada? Tag shaashadaha waaweyn, 15-inch ama wax ka badan , iyo xajmiga sare, qaabka qeexida sare (1920x1800 pixels). Waxaad u maleyneysaa inaad sidoo kale rabto in aad adigu aad u adag tahay sida ugu macquulsan dhammaan kaydinta warbaahintaada, tusaale ahaan, wadooyinka adag ee 750GB ama ka badan. Ciyaaryahanka Blu-Ray ayaa laga yaabaa inuu ku jiro liistadaada daawashada filimka, iyo sidoo kale dekadaha HDMI iyo / ama TV-yada siman.
Socdaal ama wax badan oo ka mid ah shaqada mobile? Nidaamku wuxuu noqon doonaa tixgelinta ugu weyn. Raadi shaashadda 13-inch ama hoosta, miisaanka 4 rodol ama ka hooseeya, iyo hal batteri oo lagu qiyaasey 6 saacadood ama ka badan. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto kaadhka telefoonka gacanta ee kombuyuutarkaaga si aad u heshid internetka markaad tagto.
Shaqooyin badan oo ah garaafyada / miidhiyaha maqaarka ama ciyaaraha? Sawir weyn oo sarreeya, xasuusno badan (4GB waa uu hooseeyaa, 8 GB waa ka fiicantahay), iyo kaadhka sawir-qaadaha ee gaarka ah waa inuu ahaadaa midka ugu sarreeya liiskaaga. Hawlaha ugu fiican, raadi shaqeynaha afar geesoodka ah.
Wixii miisaan ah ee waxqabadka iyo gaadiidka , raadso laptop khafiif ah ama iftiin leh oo leh 13-ama 14-inch oo bandhig, dhexdhexaadiyaha dhexdhexaadka ah (sida, Intel processor i5 processor), 4GB ama in ka badan RAM , iyo 500GB ama in ka badan oo meel bannaan oo adag (ama, waxqabadka ugu wanaagsan, wadada adag ).
4. Akhri faallooyinka. Markaad haysato liiska hubinta, waa waqtigii aad ku heli lahayd laptops ku haboon biilka. Ka fiiri boggaga macaamiisha sida ConsumerSearch si aad u aragto laptopska ugu fiican, kadibna isbarbardhig sifooyinka liiskaaga. Maskaxda ku hay in qaar badan oo ka mid ah shirkadaha laptop-ka, sida Dell iyo HP, ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya in aad rakibatid laptops-gaaga gaarka ah - hagaajinta qadarka RAM ama inaad dooratid darawalad kale oo adag, tusaale ahaan.
5. Is barbar dhigo laptops. Ugu dambeyntii, waxaan jeclahay inaan miiska saaro marka la barbardhigo xulashooyinka ugu sareeya. Waad isticmaali kartaa waraaqaha qoraalka ah iyo liistada tusaalaha (processor, xusuusto, darawal adag , kaararka sawirada , iwm.) Iyo weliba qiimaha laptop kasta si aad u sameyso doorashadaada ugu dambeysa. Tusaalahan laptop-ka ee interactive waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad xoojiso fursadaha, adigoo shaandheynaya laptops ay diyaar u yihiin.
Ka hor intaadan iibsan, sidoo kale hubi inaad ka faa'iideysato kaydka suurtogalka ah ee laptop-kaaga.
Farqiga u dhexeeya iPad 3 iyo iPad 4
Ka hor inta aadan iibsanin Editing Video Kumbuyuutar
Chromebooks iyo Tablets on Miisaaniyadda
Miyaad u Heshaa iPad Mini 4?
7 Kombiyuutarrada ugu habboon ee loo yaqaan "Ergonomic Keyboards" si ay u iibsadaan 2018
Farqiga u dhaxeeya 4G iyo WiFi iPad
Xakamaynta Facebook-ka Gaarka ah ee Posts ee Emailka
Sida loo Xareeyo Firmware Password ee Macmalkaaga
Xasillooni degan: Xasuuso 2, 2aad: Xaqiijinta PS4
Sidee loo xayeysiiyo Sawirkaaga Kumbuyuutarkaaga Android
Noocyada Software Graphics
Talooyin ku saabsan Shaqaaleysiinta Hawlwadeenada Mobile App Developer
Ilaali Browser-ka Firfoonka 'Ku Saabsan' Amarada
"The Sims 2" khiyaameeyaan khiyaameeyaan
Fursadaha Bilawga Sare
Kala hadal sida Maalinta Burcad-badeedda: Farshaxanka Farshaxanka iyo Farqiga
Sida loo yareeyo Kaadhka Kaarka Sawirada ee Kumbuyuutarka Dhibcaha ee XP
Waa maxay Kobo? Waa kuwan fiiri tartanka Cajiibka
8-tii ugu fiicnayd ee kuleylka ah ee lagu iibsado sannadka 2018
Diiwaanada DVD-ga DVD-ga Waqtiga Kaydinta
Kufsiyeyaashu ma afduubi karaan baabuurkayga?
Excel Fikradaha Fikradaha
Waa maxay faylka VCF?
Sida Loo Bixiyo Dhibaatada Bixinta ee Taageerada iTunes
Sida loo sameeyo CG-ga xun